बलिउड | BBM WORLD TV
Posted By: rozeenaon: In: बलिउड, मनोरञ्जन, सेलिब्रेटी अपडेट
‘केजीएफ’ को अपार सफलतापछि फिल्मको दोस्रो च्याप्टर प्रतीक्षित बनेको छ । फिल्ममा अझ सञ्जय दत्त पनि हुने भएपछि फ्यानको पर्खाइ हुने नै भयो । फिल्ममा सञ्जय दत्त खलनायकको भूमिकामा देखिनेछन् । आज स...	Read more
सञ्जय दत्तको पहिलो फिल्मको प्रिमियरमा किन एक सिट खाली ?
आजभन्दा करिब ३९ वर्ष पहिले बलिउड चर्चित अभिनेता सञ्जय दत्तले फिल्मी क्षेत्रमा पहिलो कदम राखेका थिए । सन् १९८१ मा उनको पहिलो फिल्म रक्कि रिलिज भएको थियो । फिल्म रिलिज ताका सञ्जय निकै उत्साहित...	Read more
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा भारतमा मात्र नभएर हलिउडमा पनि चर्चामा छिन् । उनले केही हलिउड फिल्ममा पनि काम गरेकी छिन् । हालै प्रियंकाले आफ्नी सासू डेनिस जोनसलाई जन्मदिनको शुभकामना दिइन् । उ...	Read more
‘तेरे नाम’मा सलमान खानभन्दा पहिले रोजाइमा थिए यी अभिनेता
सन् २००३ मा रिलिज भएको फिल्म ‘तेरे नाम’ बलिउडकै उत्कृष्ट लभस्टोरी फिल्ममध्ये एक हो । यो फिल्म तमिल फिल्म ‘सेतु’ को रिमेक हो । पहिले फिल्मको हिन्दी राइटस् रामगोपाल बर्माले खरिद गरेका थिए । यो...	Read more
Posted By: rozeenaon: In: बलिउड, भिडियो, मनोरञ्जन
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको फिल्म ‘दिल बेचारा’ को ट्रेलरले विश्व रेकर्ड राख्न सफल भएको छ । सोमवार रिलिज भएको फिल्मको ट्रेलरले छोटो समयमा धेरै लाइक्स पाउने विश्वकै पहिलो भिडियोको रेकर...	Read more
चर्चित भारतीय कोरियोग्राफर सरोज खानको निधन
भारतकी लोकप्रिय कोरियोग्राफर सरोज खानको निधन भएको छ । ७१ वर्षीया खानको शुक्रवार हृदयाघातका कारण निधन भएको हो । केही दिनदेखि सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएपछि उनलाई मुम्बईको बान्द्रास्थित...	Read more
बालिउडका ३ खानसहित हलिउडका सुपरस्टारलाई पछि पार्दै अक्षय कुमार
बलिउडका खेलाडीको नामबाट परिचित चर्चित सुपरस्टार अक्षय कुमारलाई पछिल्ला वर्षमा हिट फिल्मदिने मेसिन भनिन्छ । उनका हरेक फिल्म ब्लक बस्टर रहने गरेका छन् । यस सफलताकापछि अक्षयको २५ बर्षको मेहनत न...	Read more
लकडाउनमा पछुतो मान्दै आयुष्मान
६ महिना पहिलेलगातार हिट फिल्मदिएपछि आयुष्मान खुरानाले एक घोषणा गरेका थिए । अबको ४ महिना उनी काम गर्ने छैनन् । बरु यस अवधीमा उनी घरभित्रै रहेर स्क्रिप्ट पढ्ने, खाना बनाउने र साथीसँग मनोरञ्जन...	Read more
आमिर खानको यो फिल्म भएको थियो सुपरहिट, पारिश्रमिक थियो ११ हजार
हालै सामाजिक सञ्जालमा उक्त तस्वीर भाइरल भएको थियो । तस्वीरमा आमिर खान आफ्ना साथी राजसँग अटो रिक्साका पछि फिल्मको पोस्टर टाँसिरहेका थिए । आमिर खानले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा ३० वर्षको करिअरमा...	Read more
के ‘गजनी’ को सिक्वेल बन्ला ? मेकर्सले दिए यस्तो संकेत
Posted By: rozeenaon: In: बलिउड, मनोरञ्जन
सन् २००८ मा रिलिज भएको आमिर खानको हिट फिल्म ‘गजनी’ को सिक्वेल बन्ने सम्भावना देखिएको छ । मेकर्सले यसको सिक्वेल बन्न सक्ने ‘संकेत’ दिएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । आमिर खानको गजनीले बक्स अफ...	Read more